Yusuf Garaad: August 2016
Duullimaadyada maalin walba yimaada Soomaaliya ee ka yimaada Kenya waxaa ay tiradoodu celcelis ahaan kor u dhaaftaa 30.
Qaarkood waa rakaab cammiran, qaarna waa xamuul. Ilo xog ogaal ah ayaa ii sheegay in celcelis ahaan 18 ka mid ah duullimaadyadaasi ay sidaan Qaad.
Dayaaradahaasi Nairobi ayay ka soo kacaan waxayna toos uga degaan magaalada Soomaaliya ee ay u socdaan iyaga oo aan meel kale lagu weecin si loo baaro.
Sii laabashadooda, intooda badan, weliba kuwa xamuulku waa faaruq. Haddana gebigood, xataa kuwa faaruqa ah, waxay Kenya ku leexisaa oo lagu sii baaraa Wajeer inta aan loo oggolaan in ay Nairobi tagaan.
Isu dheellitir la’aanta ganacsi ee labada dal ee deriska ah maxaa lagu xallin karaa ayay kula tahay?
Sideese la isugu soo dhoweyn karaa habdhaqanka aan is waafaqsaneyn ee hey’adaha Soomaaliya iyo Kenya siiba kuwa amniga, socdaalka iyo canshuuruhu ay ula dhaqmaan dadka iyo ganacsiga isaga gooshaya labada dal?
Beryahaan waxay dhex wareegeysaa dhallinyarada oo hees ahaan u jecleystay iyo dad aan qaarkood heesaha sidaa u dhegeysan laakiin uu macnaheedu taabtay.
Arrimaha ay heestu ka hadleyso waxaa ka mid ah nooc qurbo-joog ah, nooc kale oo xildhibaanno ah iyo nooc fannaaniin ah. Suugaanyahanka erayada tiriyay wuxuu ula baxay Xildhibaan-Qooto iyo Fannaan-Qooto.
Fannaanku wuxuu ka digay, xataa qofkii ka jawaabi lahaa oo wuxuu hadalkiisa ku soo geba gebeeyay Qofkii meel xanuunto, usaa soo qeyli doona.
Erayada heesta waxaa leh kuna luuqeeya Cabdi Maaxi Muunye.
Adoo qarash la’aan eh
Qorshuhu kaa wareeray
Quraacda kuu gooysay
Qadana aadan haysannin
Qurbaha sharci ku leedahay
Qaaradda Yurub ku nooshahay
Oodna qaawan tahay
Qoryo intiid is marisay
Adi qooto ma ku marqaantay
Qooteeyow Qooto Quutow
Qooto qooto miyaa?
Qoftoo lee is barateen
Reerkooda qani yahay
Qubxi intii ka dhergisay
Qoor sagaara ku qabatay
Qajaf aadan siinnin
Adi qooto ma ku aroostay?
Adoo waxba qoreynin
Qalin iyo buug ad qaadannin
Aqoonteed sare lahayn
Qibraddaadu ey tahay
Qeybta fadhi ku dirirkiyo
Qeybta indha adeyga
Dalkii inaa u qaxday
Xildhibaan Qooto ma ku tahay?
Adoo qaabka heesaha
Saddax qudde aad dhiibtid
Qol lagugu soo xiro
Qub iyo qac ku duubtid
Qataraa tahay lagu yiraa
Qab weyni aad ka qaaddid
Qofna aad salaamin
Fannaan qooto ma ku tahay?
Anoon nii qudbeynin
Qooto ma niigu sheegay
Anoo nii qaldeynin
Qooto ma iila heesteen
Qofkii meel xanuunto
Usaa soo qeyli doona
Been ku noolow
Been been ku noolaaw
Marka aad ra'yigaaga dhiibato ka dib, waxa aad Qooto Qooto ka dhegeysan kartaa Youtube.
Posted by Yusuf Garaad at 15:55:00